Girazi rakazadzwa ruby ​​chitupa, Fissure yakazadzwa ruby. Mutengo pa carat - vhidhiyo
Girazi rizere ruby
Tags zadzwa, Girazi rizere, Ruby
Kuzadza kutsemuka kana kutsemuka mukati meRuby negirazi rinotungamira kana chinhu chakafanana kunovandudza kujeka kwedombo, zvichiita kuti marubhi aisakodzera kare akwane zvekushandisa muzvishongo. Girazi rakazadzwa ruby ​​kuzivikanwa kuri nyore uye mutengo waro unodhura kupfuura irre isina kurapwa.
Tungamira girazi rizere ruby
Matombo akaomarara akafanorongedzwa kuti abvise tsvina dzese dzinogona kukanganisa maitiro
Dombo rakaomarara rinoshambidzwa nehydrogen fluoride
Iyo yekutanga yekudziya maitiro panguva iyo pasina mafirita akawedzerwa. Iyo yekudziya maitiro inopedza kusvibiswa mukati mekutsemuka. Kunyangwe izvi zvichikwanisika kuitwa patembiricha inosvika 1400 ° C (2500 ° F) zvinowanzoitika patembiricha inosvika 900 ° C (1600 ° F) sezvo silika re rutile richiripo.
Yechipiri yekupisa maitiro muovheni yemagetsi ine akasiyana makemikari ekuwedzera. Mhinduro dzakasiyana uye musanganiswa zvakaratidza kuti zvinobudirira, zvakadaro zvinonyanya kutungamira-zvine girazi-poda inoshandiswa parizvino. Irubhi yakanyikwa mumafuta, ndokuzofukidzwa nehupfu, yakaiswa pane tile ndokuiswa muhovhoni umo inodziya panosvika 900 ° C (1600 ° F) kweawa rimwe chete mumhepo ine oxidizing. Iyo puru yeyeruvara rweorenji inoshandura pakudziya kuita yakajeka kune yeruvara-yeyero, iyo inozadza kutsemuka kwese. Mushure mekutonhodza ruvara rwepauta rwakajeka zvizere uye zvinoshamisa kunatsiridza iko pachena kujekesa kweruby.
Kana ruvara ruchida kuwedzerwa, iyo poda yegirazi inogona "kusimbiswa" nemhangura kana imwe simbi oxides pamwe nezvinhu zvakaita sesodium, calcium, potasium nezvimwe.
Yechipiri yekupisa nzira inogona kudzokororwa katatu kana kana, kunyangwe kuisa akasiyana masanganiswa. Kana zvishongo zvine marubhi zvichidziirwa kugadzirisa. Iyo haifanire kuvezwa ne boracic acid kana chero chinhu chipi zvacho, sezvo izvi zvichikwanisa pamusoro pechiso. Haifaniri kuchengetedzwa sedhaimani.
Girazi rakazadza ruby ​​kuzivikanwa
Mushonga wacho unogona kuzivikanwa nekucherechedza mabhuru mumatanda uye kutsemuka uchishandisa 10 × loupe.
Ndingaudza sei kana ruby ​​razara negirazi?
Chinhu chinonyanya kuzivikanwa chinoonekwa cheyakasanganiswa ruby ​​ndiyo yemukati gasi matema. Aya anogona kunge ari ega matunhu kana makore emabhuru, akapetwa kana kutenderedzwa, uye iwo aripo mune angangoita mafissure akazadzwa marubhi. Kazhinji kazhinji, ivo vanoonekwa kunyangwe kune ziso risingabatsiri.
Ko girazi rakazadzwa Ruby zvakasikwa here?
Ehe, ibwe rakarapwa. Yakagadzirwa ichishandisa kupisa uye chinhu kuunza yakadzika yakatsvuka ruvara senge yechisikigo ruby, tungamira girazi-rakazadzwa marubhi anorapwa kuti azadze akatsemuka aripo mudombo. Aya matombo anokwanisa kutevedzera ruby ​​tsime, asi haaenderane nesimba uye kusimba kune iwo mabwe echokwadi anayo.
Ko girazi rakazadzwa nerubhi harina maturo here?
Girazi rizere ruby ​​mutengo wakachipa kwazvo pane irry isina kurapwa. Kubudirira kwekurapa kunoshamisa, mukuti inoshandura corundum iri opaque uye inodokuva isingakoshi kuita zvinhu zviri pachena zvakakwana kuti zvishandiswe muzvishongo. Chokwadi, matombo anogona kuratidzika seanonakidza kune mutengi asina kudzidza. Zvinogona kuve gumi kusvika zviuru zvemazana zvakachipa pane imwecheteyo isingatariswe dombo.
Isu tinogadzira zvishongo zvetsika nefissure yakazadzwa ruby ​​semhete, mhete, bracelet, chishongo kana chishongo.
Tags Ruby, nyeredzi
Tags Ruby, nyeredzi, synthetic
Ruby mu zoisite
Mahara kuratidza kutumira kune chero kuraira kweinenge $ 50.00 muchitoro chedu